hoy Rasoaniaina Zoe Claire, sefom-pokontany ao an-toerana ka tokantrano maro no efa lasibatra. Ankoatra izay dia manao ny ataony ihany koa raha ny fanazavany ireo mpanendaka. Manomboka eo amin’ny Horizon ka hatrany amin’ny PMU eny Ampasika no tena ahitana izany, hoy izy ka tsy matahotra ireo jiolahy na dia amin’ny andro atoandrobe nanahary aza. Voatery nandray fepetra izy ireo ka efa misy ny fiaraha-miasany amin’ny polisy sy ny zandary. Anisan’izany ny fanaovana fisafoana eran’ny tanàna, ny fanentanana ny mponina mba tsy hivoaka intsony manomboka amin’ny 9 ora alina ka hatramin’ny 3 ora maraina….. Efa nisy ny vokatra azo, hoy hatrany ity sefom-pokontany ity ka hiezaka hatrany izy ireo sy ny kaominina ary ny mpitandro ny filaminana hanatsara ny fomba fiasany.